Oscar 2020: Etu esi soro gala na nhoputa nile | Akụkọ akụrụngwa
Oscars bụ emume nkiri site na nnwere onwe, nnukwu ihe nrite dị ka ọ ga-ekpebi ma fim ọ dị ezigbo mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Anyị na-eche ihu mbipụta nke 92 nke onyinye ndị a na-ewu ewu nke a na-eme na bylọ ihe nkiri Dolby na Los Angeles, n'ụzọ ziri ezi na Walk of Fame. N'ihi mgbanwe oge, ọ ga-abụ oge ịghara ịrahụ ụra ma ọ bụrụ na i bu n'obi ịhụ gala dum, yabụ anyị na-akwado ka ị dozie caffeine dị elu. Thatbụ na ọ nwere ike, Anyị na-ewetara gị nhọpụta niile maka Oscars yana ndị ọzọ kachasị mma iji soro mmemme ahụ na ntanetị. Chọpụta anyị onyinye onyinye kacha mma.
1 Tọ oge na ebe ị ga-ahụ Oscars 2020
2 Movistar + naanị
4 Nhọrọ niile nke Oscars 2020
4.1 Ihe nkiri kacha mma
4.2 Onye isi nduzi kacha mma
4.3 Nwanyị kacha mma
4.4 Onye kacha mma ihe nkiri
4.5 Best Kwado Omee
4.6 Onye na-akwado ihe nkiri kacha mma
4.7 Ihe nkiri kacha mma
4.8 Ihe nkiri kacha mma nke mba ọzọ
4.9 Foto kacha mma
4.10 Akwụkwọ kacha mma
4.11 Akwụkwọ kacha mma kacha mma
4.12 Ndozi kacha mma
4.13 Ihe kacha mma na ntutu
4.14 Egwu Kacha Mma
4.15 Ulo Oma Onye Oma
4.16 Kasị Mma Production Design
4.17 Ihe nkiri kacha mma kacha mma
4.18 Best Short Nkiri
4.19 Uda Ka Mma
4.20 Ngwakọta kacha mma
4.21 Ihe Nlere Anya Anya
4.22 Ihe omuma kacha mma
4.23 Best Original ihuenyo
Tọ oge na ebe ị ga-ahụ Oscars 2020
Gala a ga-ebido n’elekere ise nke ụtụtụ na Los Angeles (United States of America), nke kwekọrọ na 02: 00 n'ụtụtụ na Spain. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-agba ọsọ ya, gala ga-adịgide ihe dị ka awa atọ, yabụ ọ ga-akwụsị gburugburu 05: 00 n'ụtụtụ na Spain, 19: 00 na Los Angeles. Otú ọ dị, ọ kwesịrị iburu n'obi na ndị a bụ ndokwa mmalite na ọgwụgwụ mgbe nke guzoro, nke na-adịghị na-agụnye ama gara aga "red kapeeti", nke nwekwara ike na-agbaso site na ụfọdụ media na-ebu a zuru ezu nlekota nke a gala.
Argentina - 22:00 mgbede
Bolivia - 21:00 mgbede
Brasil (Brasilia) - 22:00 elekere.
Chile - 22:00 mgbede
Colombia - 20:00 mgbede
Costa Rica - 19:00 mgbede
Cuba - 20:00 mgbede
Ecuador - 20:00 mgbede
United States (Washington DC na Miami) - 20:00 elekere.
Mexico (Mexico City) - 19:00 elekere
Panama - 20:00 mgbede
Paraguay - 22:00 mgbede
Peru - 20:00 mgbede
Puerto Rico - 21:00 mgbede
Uruguay - 22:00 mgbede
Venezuela - awa 22
Movistar + naanị
Ọrụ audiovisual nke Telefónica nwere ikike naanị ịgbasa 2020 gala Oscars. Malite na 00: 30 oge Spanish, ọ ga-amalite na ialpị 30 akwa uhie ebe a ga-ahụ ma nyochaa ụdị nke ndị na-egosipụta ebe ahụ, ụzọ ha ga-esi nọrọ n'oche ha na Dolby aterlọ ihe nkiri, oge nke na-ahapụ ezigbo mkpuchi maka afọ na-esote na nke mere ka anyị nwee oge dị egwu ọchị na ihere n’etiti kpakpando dị iche iche nke sinima ụwa. Otú ọ dị, a Ngosiputa onyonyo zuru oke na Channel # 0 (Dial 7) na Movistar Estrenos (Dial 30) site na 23: 30 pm oge Spanish.
Budata Movistar + maka gam akporo
Budata Movistar + maka iPhone
Ya mere, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ gala ma na TV na site na nyiwe niile ebe ngwa «Yomvi» dị (ama, mbadamba na laptọọpụ). Ọ dịchaghị mkpa ịnweta Movistar + Premieres ebe ọ bụ na, dị ka anyị kwuru, a ga-ahụ ya na # 0 nke bụ ọwa dị na Dial 7 nke Movistar + decoder na nke dị na ngwungwu telivishọn niile nke ụlọ ọrụ na-enye ndị ọrụ ya.
Ọ bụrụ n ’ọ dabara na ị ga-ebili n’isi ma ọ naghị adị gị ka ị ga-abịa n’ọfịs n’echi ya n’ọchịchịrị, na Mọnde, Febụwarị 10 Movistar na-aga ịgbasa ihe pụrụ iche na ikpo okwu VOD ya mere ị nwere ike ịnụ ụtọ ya mgbe ọ bụla ịchọrọ ọ ga-agụnye oge kachasị mma nke gala.
Spanish ọha na eze telivishọn enweghị ikike ịgbasa 2020 Oscars gala, agbanyeghị, ha ga-enyocha ya nkeji site na nkeji site na mmemme pụrụ iche «De Pelicula» ka a ga-agbasa site na 23: 30 pm na Radio Nacional de España (nke ị nwere ike ịkụ na ntanetị).
RVE A La Carte - Nyocha Oscars
N'ime mmemme a, ha ga-agwa anyị ihe ejiji na akwa uhie na-acha uhie uhie ma emesịa ha ga-ekwu maka nhọpụta na onyinye ndị niile na-ege ntị. Agbanyeghị, n'agbanyeghịkwa ịbụ mmemme redio, site na RTVE A La Carta ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ mmemme pụrụ iche "Nkeji site nkeji" Nke ahụ ga-enye gị ohere ebe a ga-agbasa ihe onyonyo nke ikike nnyefe ma anyị ga-elele mgbasa ozi ahụ na oke nkenke ikike. Yabụ naanị ndị ọrụ Movistar + ga-enwe ike ịhụ gala na ihe onyonyo nke ime.
Nhọrọ niile nke Oscars 2020
Womenmụ obere ụmụ nwanyị
Akụkọ nke alụmdi na nwunye
N'otu oge na hollywood
Onye isi nduzi kacha mma
Quentin Tarantino (N'otu oge na ... Hollywood)
Bong Joon Nye (Parasaiti)
Nwanyị kacha mma
Scarlett Johansson (akụkọ ihe mere eme nke alụmdi na nwunye)
Saoirse Ronan (Womenmụ obere ụmụ nwanyị)
Charlize Theron (El asịrị)
Onye kacha mma ihe nkiri
Antonio Banderas (Mgbu na ebube)
Leonardo DiCaprio (N'otu oge na ... Hollywood)
Adam Direba (Akụkọ nke alụmdi na nwunye)
Jonathan PrycePapa abụọ ahụs)
Best Kwado Omee
Laura Dern (Akụkọ nke alụmdi na nwunyeo)
IheanyichukwuWomenmụ obere ụmụ nwanyị)
Margot Robbie (Na asịrị)
Onye na-akwado ihe nkiri kacha mma
Tom Hanks (Bọchị mara mma na agbata obi)
Anthony HopkinsAbụọ poopu)
Al Pacino (ndị Irish)
Joe Pesci (ndị Irish)
Brad Pitt (N'otu oge na ... Hollywood)
Esi zụọ dragọn gị 3
Ebee ka ahụ m dị?
Ihe nkiri kacha mma nke mba ọzọ
Honey obodo (Ugwu Macedonia)
Ndị Miserables (France)
Mgbu na ebube (Spain)
Parasaiti (South Korea)
Foto kacha mma
N'otu oge na ... Hollywood
Americanlọ Ọrụ American
Ọnụ nke ochichi onye kwuo uche ya
Akwụkwọ kacha mma kacha mma
Mụta Skateboard na Warzone (Ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ)
Ndụ Na-erute M
Louis onye Superman
Na-agagharị Run Cha-Cha
Ndozi kacha mma
Ihe kacha mma na ntutu
Nwoke: Nwanyị Nwanyị nke Ọjọọ
Egwu Kacha Mma
Star Wars: Nbili nke Skywalker
Ulo Oma Onye Oma
Toy Story nke 4 (maka 'Apụghị m ịhapụ gị tufuo onwe gị')
Rocketman (maka '(m ga-achọ) ịhụ m n'anya ọzọ')
Ọganihu (maka 'M kwụ gị n'akụkụ')
Oyi kpọnwụrụ II (maka 'N'ime Onye A Na-amaghị Ama)
Harriet: searchchọ nnwere onwe (maka 'Guzoro')
Kasị Mma Production Design
Ihe nkiri kacha mma kacha mma
Dcera (Nwa nwanyi)
Best Short Nkiri
Window nke Agbata Obi
Uda Ka Mma
LU Mans '66
Ngwakọta kacha mma
Ihe Nlere Anya Anya
Ndị na-abọ ọbọ: Endgame
Ihe omuma kacha mma
Best Original ihuenyo
Daggers na azụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Oscars 2020: Otu esi agbaso gala na nhoputa niile